Marc Bartra oo sheegay inuu mooday inuusan mar dambe ciyaari doonin kubbada cagta kaddib qaraxii uu ku dhaawacmay! - Hablaha Media Network
Marc Bartra oo sheegay inuu mooday inuusan mar dambe ciyaari doonin kubbada cagta kaddib qaraxii uu ku dhaawacmay!
HMN:- Marc Bartra ayaa shaaca ka qaaday inuu u cabsaday waayihiisa ciyaareedka kaddib qaraxii la la beegsaday baskii uu saarnaa ee siday ciyaartoyda kooxdiisa Borussia Dortmund ka hor kulankii Champions League ay la yeesheen kooxda Monaco bishii April ee la soo dhaafay.
Waxa uu ahaa laacibka kaliya ee ku dhaawacmay qaraxaas waxyeelada u gaystay Baabuurkii uu saarnaa, waxaana daafacii hore ee Barcelona uu maray qalliin gacanta ah.
Laacibkan 26-sano jirka ah ayaa sheegay inuu maleeyay in uusan mar dambe ciyaari doonin kubadda cagta wareysi uu bixiyey kaddib dhaawicii ka soo gaaray qaraxaas.
“Markii uu weerarku dhacay, waxaan mooday inaan mar dambe awoodi doonin inaan ciyaaro, ma dhaqaaqi karin 5 ama 10-kii daqiiqo ee ugu horreysay waxna ma maqli karin.” Bartra ayaa sida u sheegay wargeyska Kicker kaddib markii ay kooxdiisu ku guulesatay koobka DFB-Pokal.
“Qalliinka kaddib markii uu dhakhtarku ii sheegay inay wax kasta si fiican ku socdaan isla markaana aan awoodi karo inaan markale ciyaaro bil kaddib, waxay ahayd mid aan la sifayn karin, waxay ahayd akhbaartii ugu quruxda badnayd.” ayuu hadalkiisa ku daray Bartra.